भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया — Sanchar Kendra
नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छैटौं संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भई शनिबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा सञ्चारकर्मीहरु सामु मन्त्री ज्ञवालीले अब सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध भएको बताएका हुन् ।
नेपालले दियो भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने कोरोना खोपलाई आपत्कालीन अनुमति
औषधि व्यवस्था विभागले ‘कोभिसिल्ड’ खोपलाई आपत्कालीन प्रयोग अनुमति प्रदान गरेको छ । नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि शुक्रबारको विभागीय निर्णयअनुसार कोभिसिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी गराए ।
यो हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालीले दर्ता गरेर ल्याउन लागेको हो । बुधबार विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९ विरूद्ध खोपको आयातका लागि उत्पादक वा आयातकर्तालाई दर्ता अनुमति पत्रका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार हालसम्म ३ वटा आयातकर्ताहरुले आवदेन दिएका थिए । केसीले भने,‘निवेदन दिएकामध्ये २ जनाको आवश्यक कागजातहरु पुगेको छैन, उनीहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याउन भनिएको छ । हाललाई भने ‘कोभिसिल्ड’ खोप ल्याउनका लागि अनुमति दिएका छौं ।’
विश्वका विभिन्न देशहरुमा तेस्रो चरणको अनुसन्धामा सफल रहेको दाबी गरिएका खोपहरुको आपत्कालिन प्रयोग सुरु भइसकेको छ ।
भारतमा कोरोना खोप कार्यक्रम कसरी भयाे सुरु ?
शनिबारदेखि भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भएकाे छ । चीनपछि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमा कसरी सुरु हुँदैछ त कोरोना खोप कार्यक्रम ?
भारतमा कोरोना खोप निःशुल्क
भारतका स्वास्थ्यमन्त्री हर्षवर्धनले सबै नागरिकलाई निःशुल्करुपमा कोरोना खोप उपलब्ध गराइने बताएका थिए । यद्यपि त्यसपछि भने अहिलेसम्म आधिकारिकरुपमा कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छैन ।
सेरम इन्स्िटच्युटले आफूले सरकारलाई उपलब्ध गराउने खोपको भाउ दुईदेखि तीनसय भारु रहने बताएको छ । भारत बायोटेकले भने आफ्नो खोपको भाउ खरिदको परिमाणमा निर्भर रहने बताएको छ । साढे ३८ लाख डोज खोपको लागि २९५ रुपैयाँ तोकेको कम्पनीले ५५ लाख डोज खरिद गर्दा सरकारलाई २०६ भारुमा खोप उपलब्ध गराएको छ ।
भारतमा कोरोना खोपलाई अनुमति दिनको लागि हतार गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कोभिशिल्ड खोपको प्रभावकारिता अन्य मुलुकमा पनि परीक्षण भइसकेकाले यसमा मानिसहरुको विश्वास देखिए पनि कोभ्याक्सिनको विषयमा भने मानिसहरुले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
यो खोपको अहिले अन्तिम चरणको परीक्षण चलिरहेको छ । यद्यपि सरकारले भने यो खोप पनि सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै आएको । तर, यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।